Miss international 2012 (One Comment) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Society & Lifestyle » Miss international 2012 (One Comment)
Miss international 2012 (One Comment)
Posted by မြစပဲရိုး on Oct 21, 2012 in Society & Lifestyle | 35 comments
Miss International 2012 ကို ကြည့်ပြီး အတွေး တွေ အများကြီးပါဘဲ။
ဘယ်သူမဆို ကိုယ့်တိုင်းပြည် နဲ့ သူများတိုင်းပြည် ယှဉ်ရင် ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကို နိုင်စေချင်တာပါဘဲ။
ကိုယ့်နိုင်ငံ ကို အားပေးတာလဲ အားပေးတာပေါ့။
ကိုယ်မနိုင်တဲ့အချိန်မှာ နိုင်သူ ကို သဘောထားကြီးစွာ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက် ချီးမွမ်းနိုင်တဲ့ စိတ်ဓာတ် ရှိဖို့ လဲ လိုတယ်။
Result မကြေငြာ ခင်အချိန်လေး ထဲ မှာ မြန်မာတွေ Live Chat ထဲမှာ ပြောနေတာတွေ တွေ့ရတာ က
ကိုယ့်လူ ဘယ်လို အခြေအနေမှာ ရှိတယ် ဆိုတာ မသိတာလား။ ပြိုင်ပွဲ ကို နားမလည်တာလား။
Final ၁၅ ယောက် မှာ ကိုယ့်နိုင်ငံ မပါကထဲ က ဆု ကြေငြာ မဲ့သူ စာရင်းထဲမှာ မပါတော့တာ ကို မသိဘဲ အတင်း ဝင်ပြီး Myanmar to Win လုပ်နေတော့ တစ်ခြားနိုင်ငံ တွေက မျက်စိစပါးမွေးစူးတာ ခံခဲ့ရတယ်။
တစ်ချို့ က ဝင်ပြီး သတိပေး ခဲ့သေးတယ်။
dwightserion7: congratulation to the winners..sorry for Myanmar…you do not deserve to be on the Top 15.
glengonz: Myanmar is not at the top 15.
Jericho Bullecer : burmese you need to rest now for shouting MYANMAR!
အဲဒီကနေ စကားများပြီး မြန်မာလိုတောင် ဝင်ဆဲကြသေးတယ်။
နိုင်သွားတဲ့ ဂျပန်ကိုလဲ တစ်ခြား သူတွေ ဆီက Congratulations Message တွေ တက်လာချိန် “ဘက်လိုက်တယ်” လို့ ပြောတာ မြန်မာဘဲ။
ဂျပန်က အိမ်ရှင်နိုင်ငံ မို့ နိုင်တယ် ပြောတာလဲ မြန်မာဘဲ။
တစ်ခြား သူ တွေ ဆီက ဒါမျိုးစကား ထွက်လာတာ မတွေ့ခဲ့ဘူး။
သူများက ကိုယ့်ထက် သာတာ တွေ ကိုလဲ ကြိုတင် သိထားသင့်တယ်။
ဒီလို နိုင်ငံတကာ ပြိုင်ပွဲ တွေမှာ ကျွန်မတို့ မြန်မာ တွေ သူများနိုင်ငံသားတွေကြားမှာ စိတ်ဓာတ် ပို ကြံ့ခိုင် ဖို့ လိုသေးသလားဘဲ။
မဟုတ်ရင် တဖြေးဖြေး နဲ့ အရိုင်းအစိုင်း နိုင်ငံ လို့ အများ အထင်ခံရမယ်။
ဝီကီ မှာတောင် ဝင် လာပြီး လှောင်ထားတယ်။
ဘယ်သူက ဝင်လက်ကမြင်း လဲ တော့ မသိ။
ရွာထဲ ကို ပြချင်လို့ အမြန် Print Screen ထုတ်ထားခဲ့ပါတယ်။
အခုတော့ ဝီကီ မော်ဒရေတာက ပြန်ပြင်ပြီး သွားပါပြီ။
ဒီလိုပြောရင် မကြိုက်သူတွေ ရှိမှာ ဖြစ်ပေမဲ့ ကိုယ့်အားနည်းချက် ကိုမှမြင်ပြီး မပြင်နိုင်ရင် ဘယ်လိုမှ ပိုပြီး မတိုးတက် နိုင်မှာမို့ပါ။
မြန်မာနိုင်ငံ ဟာ စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်စွာ နဲ့ ကမ္ဘာ့အလည် ဂုဏ်ဝင့်ထည် နိုင်ပါစေ။
နိုင်ရင်လဲ သိက္ခာရှိရှိ ဝင့်ကြွား တတ်ပါစေ။
ရှုံးရင်လဲ သိက္ခာရှိရှိ ရှုံးနိမ့် တတ်ပါစေ။
ပထမဆုံး comment လေးအတွက် ကျေးဇူးပါ အန်ကယ်ကြီးရေ။
ကျွန်မလဲ ကိုယ့်တိုင်းကိုယ့်ပြည် အတွက် ဂုဏ်ယူချင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အများကြားမှာ သိက္ခာရှိရှိ နေတတ်၊ ပြောတတ်၊ တွေးတတ်ဖို့ လိုသေးပါတယ်။
အဲဒီအတွက် ပညာပေးတွေ အများကြီးလိုပါတယ်။
တဖြေးဖြေး နဲ့တော့ ပိုပြီးကောင်းလာမယ် မှန်းပါတယ် ရှင်။
ပြောပြန်ရင်လည်း ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ် လှန်ထောင်းရာကြတော့မှာပဲလေ ….
မြန်မာပရိတ်သတ်က ဖြစ်စေချင်တာ လွန်ကဲသွားတော့လည်း သူများနိုင်ငံတွေက
မျက်စိစပါးမွေးစူးစရာ ဖြစ်သွားတယ် ထင်ရဲ့နော်..အရီး…အကောင်းဘက်က တွေးရင်
တော့လည်း Myanmar ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ခုတော်တော်များများ ပိုသိသွားကြတာပေါ့..း)
ဟိုတယောက်လည်း သီလရှင် ဝတ်သွားပီကိုး. ညင်းညင်း
အဲလာ ဂဏန်းမလေး သမီးရဲ့။
အဲတုန်းက မဂီ တောင် ဘုန်းကြီးဝတ်ဖို့ စဉ်းစားသေး။
အခုတော့ အကျိ ကို မေ့နေပြန်ပြီ။
မြန်မာဆိုတာကို ကောင်းသောအမြင် နဲ့ ပိုပြီးသိစေချင်ပါတယ်၊
မဟုတ်ရင် မသိတာက မှတော်သေးသလို ရှိမယ်။
နှင်းနှင်း Avatar ပုံကလည်း ပူဖောင်းကြိုးပြတ် စိမ်းပြောင်ပြောင်လေးဆိုတော့
(ခေါင်းတုံး စိမ်းစိမ်းလေးလို့ အတွေးပေါက်ပြီး) မိဂီများ နှင်းနှင်း လှမ်းနှောက်
လိုက်တာလားလို့… အတွေးကလည်း ချော်ချော်ထွက်သွားတတ်တယ်… :D
အရီးပြောပြတာ ခုထိ စဉ်းစားလို့မရသေးဘူး…း)…
ဒီရွာထဲက ဂဏန်းထီးလေး/ကြီး တော့ သိတယ်လေ..
ကယ်လိုက်တဲ့ အကျိကရော အရီးလား?
အရီးပြောတဲ့အချက်ကို ထောက်ခံပါ၏…နှင်းနှင်းက မြန်မာချင်း သွေးကြော
ဆွဲပြီး ဖော့ပြောလိုက်တာပါ…း)
သချာင်္ဝင့်ကျော် လို့ သူညွန်းတဲ့ ကလေးမလေး ကို ဂဏန်းမလေး လို့ ဆိုတာ။
အကျိ ဆိုတာကတော့ သူ့အနားက နိဟွန်းမမလား၊ စိနတိုင်းမမ လားတော့ မသိပါ။
တကျိကျိ တော့ ဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်။
အခု အကျိ ကနေ အယာ ကို တစ်ယောက်ပြောင်းဦးတော့မယ်။
အရီးပြန်တာ စောင့်နေတာ…အဲ့လိုလား….ပေါက်သွားပြီ…. :D
ဒီနေ့ကစ ဇီးကွက်ဘ၀ စွန့်လွှတ်တော့မလို့..အရီးရေ..နောက်ထပ်
မချိန်းဘဲ တွေ့နေကြအဖွဲ့ဝင်တွေပါ…တစ်ခါတစ်ခါ တွေ့တဲ့သူတွေ
အရေးမတတ်လို့ အရီးပို့စ်မှာ စိမ်းရာက ဦးဖျားနီသွားရပြီ..အရီးရေ…
ပြောရက်လိုက်ကြ တာ ကွယ်..
မင်ဂါဆောင် ရာသီမို့ …မိဂီ လူရှေ့မထွက်ဖို့
စဉ်းစားထားပါတယ်.. လိုအပ်ရင် ဖေ့စဘုတ် အကောင့်ပါ
ပိတ်သိမ်းပါမယ်.. အသဲဒေ နာလွန်းလို့ပါ…
စက်ရုံရီးထဲမှာပဲ ပရင့်တာ ပုံးခွံထဲ အိပ်လို့
သမုဒယမီးဟာ ပူလောင်တယ်ဆိုတာ သိသွားပါဘီ…
အရက်နဲ့ စီးကရက် ကိုလည်း ပါနုပေတံလိုက်ပါဘီ
ဘယ့်နှယ့်ဂျာ … သင်္ဘောသီး ဆိုတာ ဘိရုမာ ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာသာ ဗီလိန် ဖစ်တာ မဟုတ်တာ
အော်… ဒင်းဖစ်စေဂျင်ဒဲ့ မာကတ္တာရီးဖစ်တော့လည်းပဲ နောက်ဆုံးတော့ အလဂါးပါဘဲ…
မောင်လေး ရယ်တဲ့ …အဲ့ဇဂါးဒေကို ၄နှစ်တောင်စောင့်ခဲ့တာပါတဲ့ …
ဟာဂျာ …၁လလောက် ဆက်စောင့်တော့ ဘာပုမှာမို့လို့တုန်း …
သင်္ဘောသီး ယူရဒယ်လို့ …
သများကို လာလာကြိုက်ပီး သများထက်သာတာ ရှာယူကြဒယ်…
I am on your side, Ayee Khine Latt. I hope you will write more this kind of positive comments. Burmese are pretty judgemental. As far as I can see we still need lots of experiences and knowledge to see the world. Once we are not confined, I hope the day will come soon to change our deep rooted life style of happy beingapig inaslop.
တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကို အမှန်အကန် တိုးတက်စေချင်တယ်ဆိုရင်ပေါ့…
အခြေအနေအမှန်ကတော့ ကျုပ်တို့လူမျိုးထဲမှာ မယဉ်ကျေးတဲ့လူတွေ ယဉ်ကျေးဘို့လိုတဲ့လူတွေ များနေတယ်… များနေသေးတယ်…
MNL ဘောလုံးပွဲ တွေမှာ အဆိုးဆုံးပါ……..။
Fall Guy တို့ နဲ့ ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုသူ အပေါင်းကို ကျေးဇူးပါရှင်။
Fall Guy ပြောသလို ဘဲ မြန်မာပြည် ဘော်လုံးပွဲ တစ်ခုမှာ ပရိတ်သတ် ရဲ့ အားပေးကောင်းမှု နဲ့ ပွဲပျက်၊ နာမယ် ပျက်ပြီးခဲ့ပြီ။
လာမဲ့ အရှေ့တောင်အာရှပွဲ မှာ အိမ်ရှင် အဖြစ် သိက္ခာရှိရှိ အားပေးနိုင်ကြဖို့ ပညာပေးတွေ လိုမယ်ထင်ရဲ့။
ပြိုင်ပွဲ ဆိုမှ အရှုံးလဲရှိ အနိုင်လဲ ရှိမယ် ဆိုတာရယ် …
“May the best man win” ဆိုတဲ့ စကား ကို လေးစားဖို့ရယ် .. တွေကို
” တဖြေးဖြေး နဲ့ အရိုင်းအစိုင်း နိုင်ငံ လို့ အများ အထင်ခံရမယ် ”
အရီးက ပညာရှိ ပီသပါပေတယ် ။
( နားခံသာအောင် ဖေါ့ပြီး ရေးတတ်လို့ )
ကျနော်ကတော့ အထင်ခံနေရပါပြီလို့ထင်တယ် ။
အခုရက်ပိုင်း Face Book တွေမှာကြည့်ရင်လည်း ၊
ဆဲသံ ဆိုသံက ကျွက်ကျွက်ကို ညံလို့ ။
အမြင် မတူတာကို ၊ ကျိုးကြောင်းပြရှင်းမယ် မစဉ်းစားဘူး ။
ဆဲမယ် ဆိုတာကြီးပဲ ။
လစ်ဘရယ်မဖြစ်သေး ရှေးရိုးစွဲနေသေးလို့ ပါ … ခွိ .. ဦးစံလှကြီးကို စတာ …
အမှန်ပါပဲအရီးရယ်..ဘောလုံးပွဲဆိုလည်းဘောလုံးပွဲမို့လို့..အခုလည်းလာပြန်ပြီး..အင်တာနက်ကနေတက်ရိုင်း ပြီးမြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင်တာပေါ့..သင်္ကြန်တုန်းကလည်းစကိုင်းနက်က နေပြည်တော်မန်းဒပ်တွေက ဖျော်ဖြေရေး တွေ လွှင့်တော့ စင်ပေါ်ရေသန့်ဗူးတွေပေါက်တာ ပလူပျံနေတာပဲအရီးရယ် သူတို့လွှင့်တာတခြားတုိုိင်းပြည်တွေကလည်းကြည့်လို့ရတယ်လေ။ ကျမတော်တော်ရှက်မိတယ်။ လာမယ့်ဆီးဂိမ်းအတွက်လည်းရင်လေးပါတယ်။ ကျင်းပမှာက နေပြည်တော်..
ငယ်ငယ်တုန်းက ကြားဖူးတဲ့စကားလေး အားကစားစိတ်ဓာတ်တဲ့…
မြန်မာတွေ စိတ်မထိန်းနိုင်လို့ နိုင်ငံတကာအလယ်မှာ အရှက်ကွဲခဲ့ပေါင်းမနည်းတော့ဘူး…
လက်ရွေးစင်ဂိုးသမား အောင်ကျော်ကျော် ချင်းမိုင်က ကစားကွင်းမှာ တဖက်အသင်းသားကို ဒေါသမထိန်းဘဲ ခြေထောက်နဲ့ထကန်တဲ့လုပ်ရပ်…
သုဝဏ္ဏအားကစားကွင်းမှာ တစ်ဖက်အသင်းကို ခဲနဲ့ထုလို့ ပွဲဖျက်ခဲ့ရတဲ့ ခြေစစ်ပွဲ…
တရားမျှတမှုရဲ့ အနှစ်သာရကို မခံစားရတာကြာလို့ တရားမျှတစွာယှဉ်ပြိုင်မှုကိုဂုဏ်မယူတတ်တာလား…
မြန်မာတွေ မရင့်ကျက်တဲ့မိမိစိတ်ဓာတ်ကို မိမိပြန်ကြည့်ပြီး ရှက်သင့်နေပြီ…
တနေ့ကတင် ဂျာနယ်ဆောင်းပါးတခုမှာ ဖတ်လိုက်ရတယ်..။ မန်းလေးမြို့က ဂျာနယ်ထင်တယ်… အဲဒီမှာ ဆောင်းပါးရှင်က သူကြုံဖူးတဲ့ အရှေ့တောင်အာရှ ဆီးဂိမ်းတွေမှာ အိမ်ရှင်နိုင်ငံတွေ ကိုယ့်လူကိုယ် ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် ဘက်လိုက်ပုံကို ရေးထားတာ။ မြန်မာပြည်မှာ လုပ်ခဲ့တဲ့ပွဲမှာ အလေးမပွဲမှာ အာရှချန်ပီယံ ထိုင်းအလေးမသမားကို ဘလိုင်းကြီး ဒိုင်ညစ်လို့ ဟိုဒင်းခမျာ ပွဲအပြီး ဆူးလေဘုရားပတ်ငိုတဲ့ အကြောင်းပါတယ်။ ပြီးတော့ ကြက်တောင်ပွဲမှာလည်း အင်ဒိုနီးရှားမယ်ကိုထင်တယ် စည်းကြပ်ဒိုင်တွေ ဝိုင်းညစ်ပေမဲ့ အင်ဒိုမယ်က ဗျုဟာပြောင်းပြီး လူတည့်တည့်ကို ရိုက်ထည့်လို့ ဘယ်လိုမှ ညစ်မရတဲ့အဆုံး မြန်မာရှုံးသွားကြောင်း ရေးထားတယ်။ ဆောင်းပါးရှင် ရေးတဲ့အထဲမှာ လောတနိုင်ငံပဲ မှတ်မှတ်ရရ သိက္ခာရှိရှိ အိမ်ရှင်လုပ်ပြီး အရှုံးခံပြခဲ့တယ်တဲ့။ ဒေသတွင်း နိုင်ငံတကာပွဲတွေသည် အဲသလို နာမည်ပျက်ရှိကြတယ်။ အိမ်ရှင်ဖက်က ကြည့်ပြန်တော့ ကိုယ့်ပရိတ်သတ်ရှေ့ မျက်နှာမပျက်အောင်၊ အစိုးရများကလည်း နိုင်ငံရေးနွယ်တတ်တယ်၊ ပရိတ်သတ်ရင့်ကြက်မှုနဲ့လည်း အများကြီးဆိုင်တယ်။ ငွေဒီလောက် အကုန်ခံ ရွှေအစစ်နဲ့ တံဆိပ်တွေလုပ်ထားတာ ကိုယ့်လူမပေး ဘယ်သူ့ကိုပေးရမှာလဲဆိုတဲ့ အမြင်မျိုး နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းမစစ်တဲ့ ဒေသတွင်းပွဲတွေမှာ သိပ်တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် ဖြစ်တတ်တယ်။ မြန်မာပြည်လို နှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်း ပထမဆုံးပြန်လုပ်တဲ့ ပွဲမျိုးမှာ မလုပ်တတ် မကိုင်တတ် ပါးရည်နပ်ရည် မရှိပုံမျိုးနဲ့ နိုင်ငံတကာ စာနယ်ဇင်း မီဒီယာတွေမှာ အဟားခံရမှာ မြင်ယောင်သေးသဗျာ။ အားကစားဝံကျီးဌာန အနေနဲ့ အခုထဲက ဘရိန်းစတောန်မ်း လုပ်ထားသင့်တယ်။ ဒေသတွင်း ထုံးစံမို့ ညစ်မယ်ဆိုလည်း လိမ်လိမ်မာမာ ညစ်တတ်ကြပါစေလို့…..။ (ကျုပ်တို့လစ်ဘရယ် သဂျီးတောင် ရွာထဲမှာ ညစ်သေးတာပဲ၊ ညစ်ကွာ.. အားပေးတယ်။ )
2013 SEA Games ကျရင်တော့ အရှက်ကွဲမယ့်အရေးရင်လေးတယ်…
ခေါင်ကမှ မိုးမလုံရင် တအိမ်လုံးမိုးမလုံ ဆိုဒါလို…
စဉ်းစားဇမ်း.. ဘာစကားပုံဒွေ သိသေးလဲ :harr:
မြန်မာလူထုရဲ့ အသိဥာဏ်ကို ဖွံ့ ဖြိုးခွင့်မပေးပဲ … သူဒို့လုပ်ချင်တာလုပ်လိုက် ပြီးရင် လူပြိန်းကြိုက် ဖားလေးငါးလေးပျော်အောင် ရေတပေါက်နှစ်ပေါက်လေးကျပေးလိုက်.. နှစ်ပေါင်းများစွာ ဘရိမ်းဝါ့ရှ် အလုပ်ခံရတဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေကို စာနာစိတ်နဲ့ ပညာနဲ့စိတ်ဓာတ် မြှင့်တင်ပေးဖို့လိုအပ်နေပါပြီ….
လူပြိန်းအမြင်နဲ့ ကြည့်မယ်ဆိုရင်တောင် ကို့မြန်မာမယ်က
နို်င်ငံတကာစံမမှီသေးတာ သိသာပါတယ် အရီးရေ။ အခုလို
တိုက်တယ်တခုရတာတောင် ဂုဏ်ယူသင့်တာပါ။ အနိုင်အရှုံးဆုံးဖြတ်တဲ့ပွဲမဟုတ်တာကို ကြံဖန်ခံစားကျတာလဲ မြန်မာ့ဓလေ့ဘဲလားမသိပါဝူး။ ဖေ့စဘုတ်မှာ ဗုတ်လုပ်ကျတာတော့တွေ့ပါရဲ့။အရီးပို့စ်တင်ပေးလို့ အဲလောက် အသဲအသန်အားပေးကျမှန်းသိရတာ။
ပြောမယ်ဆိုလည်း ပြောချင်စရာ အရီးရေ ။ နောက်ဆုံး ပေ့ခ်ျက ဖြုတ်ပြီး လော့အင်လုပ်မှ ၀င်ကြည့်လို့ ရအောင် လုပ်လိုက်ပုံရတယ်။
အရီးလို အကျိုးကြောင်းပြောပြတဲ့ ဟိုဘက်မှာနေတဲ့ သူတယောက်ရဲ့ စာကို ၀ိုင်းပြောထားကြတာလည်း တွေ့မိလိုက်တယ် ။
နောက်ဒီမှာလာလုပ်မဲ့ နိုင်ငံတကာပွဲတွေအတွက် ကွင်းတွင်း ကွင်းပြင် ရမ်းကားတာ ရေသန့်ဘူးတွေ နဲ့ ပေါက်တာတွေ အတွက် နောင်မလုပ်ရဲအောင် နောင်ကြဉ်မဲ့ ဥပဒေလိုမျိုး ပြဌာန်းနိုင်မှ တော်ကာကြမယ် ထင်တယ်။ မန်းလေးက သာဆိုးသေး ။
ဒီမှာ အစွန်းရောက်တာမှ အောက်ပြုတ်ကျဖို့ တဲတဲလေး လိုအောင်ကို အစွန်းရောက်နေကြတာ။
နိုင်ရင်နိုင် မနိုင်ရင် ဂဲနဲ့ ထုမယ်ဆိုတာမျိုးတွေ ရင်လေးစရာပဲဗျာ..
ီဆီးဂိမ်းမှာလဲ ဘယ်လိုလာဦးမလဲ မသိဘူး…အာနိတ်စ..ဒုတ်ခ အနတ်ဂ
မှန်တယ်အရီးရေ ပြောချင်နေတာ။ မြန်မာဖြစ်တာနဲ့ဝိုင်းပြီးဗုတ်ကြတယ်။
နိုင်စေချင်တာပေါ့ အရီးရယ်ဒါပေမယ့် မြန်မာတွေပိုလွန်းနေကြတယ်လေ ကဲသည်းနေကြတယ်။
ရွှေကြည်အမြင်ပြောရရင် ရွှေကြည်သာဆိုရင် ကိုယ့်မြန်မာအချင်းချင်းက၀ိုင်းပြီး ဗုတ်လို့ရတဲ့ဆုကိုမမက်ဘူး။
ကိုယ့်အချင်းချင်းကိုယ့်ငါးချဉ်ကိုယ်ချဉ်ပြီးရလာတာလေ။ အားငယ်နေမှာစိုးလို့အားပေးတာကိုတော့လက်ခံပါတယ် အတင်းကြီးနိုင်ကိုနိုင်ရမယ်ဆိုတာကတော့…။
နိုင်တာမနိုင်တာထက် ဂုဏ်သရေရှိရှိယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရင်ပဲ ဂုဏ်ယူနိုင်ပါတယ် ကျေနပ်ပါတယ်။
မျိုးချစ်စိတ်မရှိလို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး … အခုပြိုင်ပွဲကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး သူများတွေဆီက ပြောသံကြားတာ မြန်မာတွေရော နိုင်ငံပေါင်းစုံကပါ ဗုတ်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုလားပဲ …… အဲဒါကို မြန်မာပီပီ မြန်မာစိတ်ဓာတ်ပြပြီး အကောင့်တွေ (၂) ခု (၃) ဖွင့်ပြီး ဗုတ်တွေလုပ်ကြတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကို ကြားနေရကတည်းက အရမ်းကို စိတ်ပျက်မိတယ် ….. ကိုယ်တိုင်လည်း အဲဒီဆိုဒ်ကို ဖွင့်မကြည့်ခဲ့ဘူး ဗုတ်လည်းမလုပ်ခဲ့ဘူး ….. သူ့အရည်အချင်းရှိရင် သူရမှာပဲလေ တိုင်းတပါးတိုင်းပြည်က မြန်မာပြည်လိုမဟုတ်ပဲ မှန်မှန်ကန်ကန်ဆုံးဖြတ်တာဆိုတော့
မဟုတ်တာတွေလုပ်ကြံပေးနေတယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကိုထားစရာမလိုဘူး ….. အားလုံးက အရည်အချင်းအစစ်အမှန်နဲ့ရခဲ့ကြတာပါပဲ …….
အမျိုးကို သိတဲ့စိတ် အမျိုးကို ချစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုတော့ လေးစားပါတယ်….
ဒါပေမယ့် ငါ့အမျိုးမှ လူထင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်မျိုးတွေကိုတော့ သတိလေးထားစေချင်ပါတယ်…
ကိုယ့်နိုင်ငံ အသရေယုတ်ပါတယ်… ဘယ်နိုင်ငံမှာရောက်နေနေ ကိုယ့်လူမျိူးကို ချစ်တဲ့စိတ်တွေကိုတော့ လေးစားပါတယ်…
မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ် ထက်မြက်တယ်လို့ ပြောဖို့ကလည်း ခက်ခက် ..
ဒေါက အထွက်လွယ်တယ်လို့ ပြောဖို့ကလည်း ခက် ..
ပလော်ပက်ချင်နယ် ပီသဖို့ ကြိုးစားရဦးမယ် …
မဟာရာဇာ အံစာတုံး၊ ဂျူဂျူး၊ Khaing Khaing၊ ရွှေ ကြည်၊ မောင်ဗိုက်၊ pooch၊ မရွှေအိ၊ Wow၊ thureinmaung၊ မာမူကြောင်ကြီး၊ ကြောင်ဝလေး၊ အလင်းဆက်၊ Crystalline၊ ကထူးဆန်း၊ အဘဖော
တို့ နှင့်တစ်ကွ ဖတ်ရှူသူအပေါင်း ကို သင်းကျူးပါ။
၂၀၁၃ အရှေ့တောင်အာရှ အားကစား ပြိုင်ပွဲမှာ အိမ်ရှင်နိုင်ငံ လုပ်မဲ့သူ ရဲ့ ပြင်ဆင်သင့်တာလေးတွေ ကို ပိုပြီး နားလည်သူ တစ်ယောက် (ဖြစ်နိုင်ရင်) အဲဒါကို စီစဉ်နေသူထဲတစ်ယောက် ဝင်ပြီး Post ရေးပေးတာ ကို ဝင်ပြီး ဆွေးနွေးကြရရင် အတော်ကောင်းမယ် ထင်တာပါဘဲ။
ကိုယ့်မြန်မာနိုင်စေချင်လို့ vote ပေးပါ ဆိုလို့ တစ်ခါတော့ လုပ်ပေးတယ်။
တစ်နေ့ ၁၀ခါလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ မဟုတ်တော့ဘူးလို့ ထင်လာတယ်။
ဒီ Vote လုပ်တဲ့ စနစ်ကို မှန်မှန်ကန်ကန် အသုံးမပြုတတ်သေးလို့ကတော့ ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာ အဝေးကြီးလို့ ပြောရမှာပဲ။
အဲဒီစိတ်ဓာတ်ကို ငါ့ဥမှ ငါ့ဥ လို့ တင်စားကြတယ်။
ကျမတို့တွေ ကမ္ဘာ့အလယ်မှာတကယ်ဝင့်ကြွားဖို့ရာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြင်ဖို့ အများကြီးလိုနေပါသေးတယ်။
မလတ်ပို့စ်ကို အား/ကာဝန်ကြီးဌာနက မြင်မိပါစေ။
နိုင်ရင်လဲ သိက္ခာရှိရှိ ဝင့်ကြွား တတ်ပါစေ။
အဲဒီစကားလေးကတော့…၂၀၁၃ အရှေ့တောင်အာရှ အားကစား ပြိုင်ပွဲ
အတွက် ဆလို၈န် ဖြစ်သင့်တယ်ဗျာ…
ကျနော် အညာမှာ လေးနှစ်ခွဲလောက် တာဝန်နဲ့နေခဲ့ဖူးတယ်…
မြို့တော့ မပြောတော့ပါဘူးဗျာ…မြို့နယ်အဆင့် ဒိုင်းဆုပေးမဲ့
ဘောလုံးပြိုင်ပွဲဟာ တစ်နှစ်မှ ဒိုင်းဆုမပေးခဲ့ရပါဘူး
ရပ်ကွက် ကျေးရွာအုပ်စုချင်းရန်သတ်ကြတာ သေနပ်ဖေါက်တားရတဲ့အထိပဲ
ဒီလိုနဲ့ပဲ ဆီမီးဖိုင်နယ်ရောက်အောင်တောင် တစ်နှစ်မှမကန်နိုင်ဘူး
2013 SEA Games ကျရင် ဒီလိုအရှက်တကွဲအကျိုးနည်း မဖြစ်ရအောင်
အားကာဝန်ကြီးဋ္ဌာနအနေနဲ့ စိတ်ဓါတ်ရေးရာမြှင့်တင်ရေး သင်တန်းတွေပေးသင့်သလို
အားပေးကြမဲ့ ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်း နိုင်ငံကြီးသားစိတ်ထားတတ်လာအောင်
မီဒီယာ တွေက ၀ိုင်းပြီး ဟောပြောပညာပေးသင့်တယ်ဗျာ…